Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu ku socota Erdogan: Maaha Qof 16 Milyan oo Dad ah ay Yaqaan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulJawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu ku socota Erdogan: Maaha Qof 16 Milyan oo Dad ah ay Yaqaan
13 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
imamoglundan erdogana channel istanbul jawaab ma ahan qof yaqaan milyan qof
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa wariyeyaasha u sheegay, “Kanal Istanbul ajandaha ayuu ku jiray tan iyo usbuucii hore. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, adiga oo tixraacaya, wuxuu yiri: Maxaad dhihi doontaa?,, "Looguma darin in aan noqdo duqa magaalada aniga oo halkan fadhiya, aniga oo aan shaqeyn, oo aan shaqooyin ka soo bixin. Waxaa la ii doortay duqa inaan ilaaliyo danaha iyo xuquuqda bulshada. 'Waad fariisataa,' bayaan kale oo ah weedha, 'Waan aqaan sida ugu wanaagsan'. Waxaan u maleynayaa in 16 milyan ay taqaan kuwa ugu fiican ..
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, miisaaniyada 2020 ayaa la ansixiyay ka dib shirkii Golaha oo ka jawaabay su'aalaha suxufiyiinta, ajandaha iyo kalfadhiga. Su’aalaha uu weydiiyay Imamoglu iyo jawaabihii uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
"Uma imaanin inaan fadhiisto"
Channel Istanbul wuxuu ku jiray ajandaha tan iyo usbuucii hore. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale wuu ku dhaleeceeyay. 'Is ogow' ayaa kuu yimid cambaareyn. Maxaad ka dhihi doontaa dhaleeceynta Erdogan?
Waqti dheer ayey qaadatay Duqa Magaalada. Sharciga dawlada hoose 18. Maqaalka, “Duqa Magaalada; wuxuu ilaaliyaa xuquuqda degmada, degmada iyo degmada danahooda. ” Sidaa daraadeed, ma ogi kuwa badhasaabnda ka soo shaqeeyey ganacsiga fadhiga. Ma aqaan in dhaqankan oo kale uu dhacay iyo in kale, waxay ku saabsan tahay Istanbul. Laakiin layguma dooran in aan noqdo duqa magaalada halkan fadhiya, aniga oo aan shaqaysan, oo aan shaqooyin soo saarin. Waxaa la ii doortay duqa inaan ilaaliyo danaha iyo xuquuqda bulshada. 'Waad fariisataa,' bayaan kale oo ah weedha, 'Waan aqaan sida ugu wanaagsan'. Waxaan u maleynayaa in 16 milyan ay taqaan waxa ugu fiican. Dareenkan, waxaan raaci doonaa hawsha ilaa dhamaadka. Waxaan u shaqeyn doonaa waxtarka bulshada. Aniguna waxaan hubin doonaa in 16 milyan oo qof ay macluumaad helaan ilaa dhamaadkaan. Waxaan ka faa'iideysan doonnaa dadka sida wanaagsan u yaqaan ganacsigan. Waxaan ugu hadli doonnaa si cod dheer dadweynaha. Waxaan gaari doonaa go’aanka bulshada, faa iidada bulshada, iyo bulshada iyo sabab guud. Sababta aan arrimahan oo dhan u wada sameyno waa, run ahaantii, qaybta ugu qiimaha badan xulashada aan ku nool nahay, oo aan loo aamusin, inaan wada hadalno. Qof kastaa wuu hadli doonaa. Had iyo jeer waxaan u hadli doonaa sidii wakiilkooda. Qofkii aan dooneynin inuu la qabsado, sifiican ayuu ula qabsan doonaa hawshan. Waxaan maqleynaa waxbadan.
MASHRUUC UMA YAHAY INAAN 'HAA' u QAADNAAMIJINO IN AAD KA QAADAN KARIN Istanbul İYE
Madaxweyne Erdoğan wuxuu shalay ka sheegay Kanal Istanbul: acak Waxay dunida u horseedi doontaa guul weyn. Annagu uma gudbinayno siyaasaddii qodista CHP. In kasta oo ay jiraan wax kasta, 2023 kama mid noqon doonno bartilmaameedyadayada Hedef Ma tixgelin lahayd arrintan?
Waxaan u gacan gelin doonnaa dadka reer Istanbul sidaa darteed haddii qofku sameeyo, wuu ka qoomameyn doonaa mashruuc kasta berri, 'Haa' ma dhihi doono.
Miisaaniyadda, shaqada xisbiga AK Party ee diyaarinta dhulgariirka, sheyga waxaa lagu dhaleeceeyay boqolkiiba 65 inuu ka hooseeyo sanadkii hore. Maxaa qayb hoose loogu qoondeeyay?
Marka laga reebo waaxdeena, oo socodsiisa geedi socodka dhulgariirka gudaheena gudaheeda, waxaan heysanaa hay'ado kala duwan, ururo iyo hoosaadyo kala gediya xarakaad miisaaniyadeed sida KİPTAŞ. Halkan, kooxda 'AK Party' ayaa leh qodob kale oo dhaliila. Waa muhiim in la garto, ma aha in lagu qoro miisaaniyad. Waxaan u baahan nahay inaan aragno waxa ka dhacaya miisaaniyadda. Waxaa jira miisaaniyad aad uga hooseysa waxa la yiri, waxaan u maleynayaa, heerka 10. Sidaa darteed, waxaan u qorey tiradaan miisaaniyada sanadkaan. Markaad eegto dhulgariirka iyo arrimo kale, waxaa jira dhibaatooyin xagga diyaarinta miisaaniyad ee Istanbul. Waxaan ka hadlaynaa daraasiin goobood oo dhismaha ah. Muddo ka badan hal sano, 1.5-2 waxay taagneyd sanado, waxay ku hanjabtay goobaha dhismaha. Waxaan la wadaagi doonnaa culeyskan iyo faahfaahintooda bulshada dhexdeeda 23 Diseembar. Annaga oo tixgalineyna arrimahan oo dhan, waxaan ku qasbannahay inaan diyaarinno miisaaniyad dheellitiran awoodda kartida miisaaniyad u dhiganta iyo awoodda amaahda iyadoo la gaarayo go'aanno ku saabsan dhammaystirka habraacyadan iyo dhinaca gabagabaynta howlahan dhinaca kale. Waxaan u maleynaynaa inaan u diyaarineyno miisaaniyad sax ah inaanan cidna u adeegsan oo aan khiyaanaynno bulshada marka loo eego sida loo maareeyo 2020. Miisaaniyadda saxda ah sidoo kale si wadajir ah ayaa loo go'aamiyay. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo xisbiga AK Party, MHP iyo isbahaysigayaga wanaagsan ee 'GOOD Party'.
NIDAAMKA KOOWAAD EE BULSHADA SOR EE KU SAABSAN HAMBALYADA KALIYA
Gawaarida biyaha qashinka ayaa isu rogay kala bar qiimaha marka loo eego sanadkii la soo dhaafay. Maxuu shaqadan u qabtay sanadkii hore qiimaha adag ee '2'?
Haddii aad maskaxda ku haysid calaamadda su'aasha oo dhan, waxaad leedahay tilmaamkayga cad. Asxaabteyda ayaa bilaabaya baaritaano ku aadan dhamaan howlahan curyaaminta ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaa naloo doortay maxaa yeelay ma noqon doonno dowlad aan ka hadlin wixii la soo dhaafay, taasi waa, sida aan uga hadlayno arrimaha maanta taagan. Sidaa darteed, habraacyada maamul ee hawlahan ayaa la bilaabayaa lana kormeeri doonaa. Dabcan, kuma noqon karno baaritaanka dib-u-eegista kahor intaan hindisada lasoo gabagabeyn. Sidee hindisadu ahayd sanad ka hor? Ma aanan helin fursad aan ku dhaleeceyno, laakiin hadda xogtan ayaa ah xogtayada dambe ee la taaban karo. Hadda, dabcan waan eegi doonnaa tan. Oo weliba marka aad gelin koritaanka qiimaha dhab ahaantii farqiga Turkiga weyn dhexe.
YENİ Waxaan hadda bilownay hindise noo gaar ah ”
Waxaad dhahday waxaad sameyn doontaa keydka ugu badan ee xaraashka. Ma jiraan dhexdhexaadiyeyaal? Waa maxay sababta qiimaha unugyadu u sarreeyaan?
In Turkey, tani waa laga fekerayo ah habka aan ku tilmaamay musuqmaasuqa, sababtoo ah qaybta dadweynaha. Xaqiiqdii, waxaan ognahay in farqiga ugu weyn ee 2019 lagu gaari doono adoo ka hortagaya qashinka iyadoo aan keydinayno hindisooyinka. Waxaan saadaalinaynaa tan hadda. Xaqiiqdii, waxaa jira kala duwanaansho dhab ah oo ku saabsan miisaaniyadda kharashaadka aan horay u soo bandhignay oo aan weli bulshada u arkin. Annagu, 10 kun oo mitir oo laba jibaaran, shay miisaaniyadda la dhammaystiray muddadii la soo dhaafay, 13 kun oo mitir murabac ah ayaa ujeedadeedu tahay inaan sameyno Waxaan haynaa xogtan qoto dheer. Waxaan hadda bilownay hindise cusub oo waaga cusub. Waxaan sameyneynaa hindisooyinkeena hadda waana bilawnay, waxaan bilownay bishaan. 2020 wuu sii socon doonaa. Waxaan arki doonaa kala duwanaanshaha dhabta ah ee 2020 oo waligeen noqon doonno taxadar la'aan wixii la soo dhaafay, si bayaan ah ayaan u baari doonaa. Waxaan la kulmi doonnaa xilli laxiriira Xilliga 16 milyan ee qof ee raadinaya xuquuq sharci. Haddii kale, waxaad ku lug lahaan doontaa xilli dadweyne aan musuqmaasuq ahayn. Uma imaanin inaan ku noqono weheliye howlahan oo kale.
“XUDUUDAHA GAARKA AH LAGU SIIN KARA LACAG”
Mid ka mid ah qodobada sida aadka looga dooday ee IMM miyuu noqon doonaa hindisada baabuurta nool?
Haa, waxay noqon doontaa mid nool oo hufan. Xaqiiqdii, kuwanu waa bilow. Waqti dheeri, waxaan qorsheyneynaa inaan siino hindisooyinkeena furan oo dhan oo buuxa sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Waxaan rabnaa dadweynaha inay arkaan sida howsha u bislaatay iyo sida ay yihiin. Baxnaaninta ama qabanqaabinta aan dooneynno in aan daqiiqad uun noogu imaan karno, laakiin waxaan dadaal badan ku bixineynaa arrintan.
KU SOO DHAWAADA GUUD
Gudaha ayaa si weyn loo dhalleeceeyay laakiin miisaaniyaddii la sameeyay laakiin si aqlabiyad ah loo aqbalay. Miisaaniyadda aadka loo dhaliilay, 'Haa' ayaa lagu yiri. Maxaa ku dhici lahaa aqlabiyadda Golaha haddii ay dhahaan 'maya'?
Hal xaqiiqo ayaa ah in miisaaniyadda iyo tirooyinku ay leeyihiin dhab. Noloshaydu waxay la soo martay tan. Nasiib darrose, qof ayaa akhriya miisaaniyadaha laga bilaabo midig ilaa bidix, qof ayaa wax akhriyaa bidix ilaa midig. Mid ayaa sameeya faallo hoose, midna wuxuu sameeyaa faallo hoose. Dareenkan, waxaad fursad weyn u leedahay inaad ku sharaxdo miisaaniyada faallooyin kala duwan. Nasiib darrose, tirooyinku waxay leeyihiin sixir caynkaas ah. Ma fiicna, dabcan. Waxaan bilaabi doonaa koorsooyinka akhrinta miisaaniyad iyo koorsooyinka maareynta aqrinta maaliyadeed ee ISMEK. Sababta oo ah run ahaantii, dadkeenna, ma ogin wax badan waxa loola jeedo miisaaniyaddu. Caddaynta dakhliga iyo kharashka, miisaaniyad u dhiganta çoğu Xitaa ma xiiseyneyno ereyo aad u fudud dad ahaan Waxa halkan lagu sheegay waa inuu ku sii nagaadaa ruuxda Golaha. Miisaaniyadda Golaha waa inay dhammaanteen anficiisa.
Gelitaan aan joogsi lahayn oo garoomada laga keenay oo laga bilaabo Kocaeli oo dhan
16 Bilaabidda Skier iyo Qofka la lumiyay ayaa la soo badbaadiyay
İmamoğlu ku wajahan Jawaabta Erdogan ee Istanbul